သစ်ဆန်းခန့်: Huawei C8813 official Rom + Root
G510 U8951 4.1.1 Root လေးပါ လိုဒါကိုအောက်မှာဒေါင်းပါ U8833 Y300-0000 V4.1.1 ကို Root မယ် U8833 Y300-0000 V4.1.1 Bulid number B170 Kernel 3.4.0 ပါ 100% စမ်းပြီးပါပြီ Y300-0000 Root ZIP ကိုဒီမှာဒေါင်းပါ U8825D Unlock မလိုပဲ Root လို့ရပီ!!!
U8825D ICS Firmware (မြန်မြန်ယူပါ)
Huawei C8813 Root ဖို့ လိုအပါဒါလေးကိုအောက်မှာဒေါင်းပါ Huawei C8813 Root zip ကိုဒီမှာဒေါင်းပါ http://www.mediafire.com/?kq8t1b2fsfmksa3
official Rom ကို ဒီမှာဒါင်းပါ http://www.huaweidevice.com/cn/downloadCenter.do?method=toDownloadFile&flay=software&softid=NDIyNDE=
Root နည်ကိုပြောပါမယ် Unlock Bootloader ကိုအရင်ဆုံးလုပ်ရပါမယ် အောက်ကလင့်မှာသွားလုပ်လိုက်ပါ
မိမိ gmail ထဲကို Unlock Code ရောက်လာပြိးဆိုရင် Root လုပ်ဖို့ ဒေါင်းထားတဲ့ Zip ကိုဖြည်လိုက်ပါ
C8813 Unlock.exe . C8813 USB Driver. C8813_OneKeyTools .C8813Root.zip လေးမျိုးလုံးပေါင်းထည့်ပေးထာပါတယ် ၁ မိမိ ဖုန်း ကို Unknown Soures & USB debugging ကို အမှန်ချစ်ပေးထားပါပြီးရင်ဖုန်းကိုပိတ်ပါ
ဘက်ထရီဖြုတ်ပါ 10 စက္ကန့် လောက်ထားပါ ဘက်ထရီပြန်တတ်ပါ VOL Down + power နိပ်ပေးပါ
Huawei Logo မှရမ်နေပါမယ် C8813 Unlock.exe ကို Runလိုက်ပါ ဖုန်းကို pc နဲ့ ချိတ်လိုက်ပါ
မိမိ် gmail ထဲ ကိုရောက်လာတဲ့Code ကိုဖြည့်ပေးပြိး Enter နိပ်လိုက်ပါ Unlock လုပ်သွားပါမယ်2မိမိ Reboot လုပ်ပြီးပြန်တက်လာပါမယ် ဖုန်းကိုပြန်ပိတ်ပါ C8813Root.zip ကို SD Card ထဲ Copy ကူးထည့်လိုက်ပါ ဘက်ထရီဖြုတ်ပါ 10 စက္ကန့် လောက်ထားပါ ဘက်ထရီပြန်တတ်ပါ VOL Down + power နိပ်ပေးပါ logo မှာ ရမ်နေပါမယ် pc နဲ့ ပြန်ချိတ်လိုက်ပါ C8813_OneKeyTools ကို Run လိုက်ပါ ဘယ်ဘက် ဘေးက နံပါတ် 3
အကွက်မှာ Bootloader & Recovery ဆိုတဲ့ စာပါဒါကို နိပ်လိုက်ပါ3မိမိ ဖုန်း Reboot လုပ်သွားပါမယ် ပြန်တက်လာရင် Recovery Mode ကိုရောက်သွားပါမယ်
အဲလောက်ဆိုရင် သိလောက်ဘာပြီးနော် ဘာကျန်လဲ ဆိုဒါ ကို install sd ကိုရွေးပေးလိုက်ပါ C8813Root.zip ကို install လုပ်ပေးလိုက်ပါ ပြီး၇င် Reboot လုပ်ပေးလိုက်ပါ ပြန်တက်လာရင် အမြစ်တူးပြီးသွားပါပြိ အားလုံးအစဉ်ပြေပါစေ စာရေးသူ
Zaw Min ThantFebruary 7, 2013 at 7:33 AMကဲ...လာပီဗျာ အားဆေးလေး တစ်ခွက်။ကျေးဇူးပါ။ReplyDeleteThu Thu KyawFebruary 11, 2013 at 9:44 AMကျေးဇူးပါ အကိုရေReplyDeleteSi Thu ThantFebruary 18, 2013 at 3:35 AMThank.ReplyDeleteHello!TharGyiMarch 8, 2013 at 11:44 AMဆရာချစ်ရေ ဒီကပဲ အားပေးရတော့မှာ ပေါ့ ကျွန်တော်ကို ဘလော့ထားတော့လဲ ReplyDeleteMYAT KO KO ZANMarch 23, 2013 at 2:40 AMအစ်ကိုတို့ရေ ကူညီကြပါအုံး ကျွန်တော် Huawei ရဲ့ unlock Bootloader code တောင်တဲ့ site မှာ Type ဆိုတဲ့ နေရာမှာ C8813 ဆိုတာကို ရွေးဖို့ မတွေ့ပါဘူး ... C8812, C8950 တို့ပဲတွေ့ပါတယ် .. ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ .. ReplyDeleteRepliesNay LinMay 15, 2013 at 1:30 AMThis comment has been removed by the author.DeleteNay LinMay 15, 2013 at 1:36 AMUnlock code အတွက် ဆိုဒ်က....(http://www.huaweidevice.com/cn/servicePolicy.do?method=toApplyUnlock )Deletekyawmin roseMay 22, 2013 at 6:20 AMတရုတ်ဆိုက်ကနေသွားပါ http://www.huaweidevice.com/cn/servicePolicy.do?method=preUnlockDeleteReplyAnonymousApril 6, 2013 at 1:54 AMg520-0000 Root လုပ်နည်းလေးလည်း ကျေးဇူးပြုပီး ပြောပြပေးပါလား။ReplyDeleteAnonymousApril 11, 2013 at 9:17 AMခု လက်ရှိ လုပ်လို့ ရသေးလား အပြင်မှာ အဲဒီ Site ပိတ်သွားပြီးပြောပါတယ် မှန် ပါလားReplyDeletesaiApril 23, 2013 at 8:23 PMhuawei mar google account lae htae lo ma ya buagyan lay pay par ownReplyDeletesaiApril 23, 2013 at 8:23 PMhuawei mar google account lae htae lo ma ya buagyan lay pay par ownReplyDeletesaiApril 23, 2013 at 8:24 PMhuawei mar google account lae htae lo ma ya buagyan lay pay par ownReplyDeleteRepliesharis mamoonMay 9, 2013 at 8:51 PMplay store tone chin dar lar? dar mha ma hote gmail tone chin dar lar?DeleteReplyAnonymousMay 4, 2013 at 8:58 AMhttp://www.huaweidevice.com/cn/downloadCenter.do?method=toDownloadFile&flay=software&softid=NDIyNDE= ဒေါင်းရဘူးဗျာ ဒေါင်းလင့်လေး ပြန်တင်ပေးပါလားဗျReplyDeletethar poutMay 5, 2013 at 4:15 AMi have error with that root.device cannot enter the phone and message..ReplyDeleteharis mamoonMay 9, 2013 at 8:49 PMdo wipe cache data and factory reset. it will work againReplyDeleteharis mamoonMay 9, 2013 at 8:51 PMdo wipe cache data and factory reset. it will work againReplyDeleteNay LinMay 15, 2013 at 1:21 AMအစ်ကိုရေ ဖုန်းကို ဆော့ဖ်ဝဲပြန်ရေးတဲ့နည်းလေး step by step ရှင်းပြပေးပါလား..ကျွန်တော်က self-study ပဲလုပ်တဲ့သူမို့ပါ သင်တန်းလည်းမတက်နိုင်ဘူးဗျာ ဈေးကြီးလို့...အဆင်ပြေရင် firmware ပြန်တင်နည်းလေးပါရှင်းပြပေးပါ လေးစားလျက်..ReplyDeletenaylin htunMay 15, 2013 at 10:36 PMအကိုရေ Huawei C-8500S ရယ် T-8600 ရယ် အဲ့ဒိနှစ်ခုကို Root ရှိရင်တင်ပေးပါလား လိုနေလို့ပါ။ReplyDeleteRepliestawtarlayMay 19, 2013 at 2:44 AMC8500S ka unlock root 3.1 nae saw lite par .. kyanaw shop kaakhu 20 lone ae kg nae tee tar pal..a sin tort pyay nay tar palMM font twin mal so yin tot .. font changer lay nae lote par ..DeleteReplyNay LinMay 16, 2013 at 12:46 AMpls upload the method of root for samsung gt-s7500.thanksalotReplyDeleteNay LinMay 22, 2013 at 10:09 PMအစ်ကိုရေ ကျွန်တော့်ဖုန်းက HTC Verizon ADR6350VW-R version android version 2.3.4 ပါ device serial number က HT1AVMA08544 ပါ version မြှင့်ချင်လို့ပါ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ? ဖုန်းကနေ မြှင့်မရလို့ ကူညီပါဦးReplyDeleteAdd commentLoad more...